Rafitra fanadiovana beton
Pipeon'ny rindrina kambana
Siko fandatsahana paompy vita amin'ny beton
Fanadihadiana sy fandalinana fironana amin'ny indostrian'ny fananganana beton manerantany amin'ny 2021
Miorina amin'ny toe-javatra manan-tantara tao anatin'ny dimy taona lasa (2016-2020), hamakafaka ny haben'ny fitaovana fananganana beton manerantany tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny refin'ny faritra lehibe, ny refy sy ny anjaran'ny orinasa lehibe, ny refin'ny vokatra lehibe fanasokajiana, ary ny haben'ny fianjerana lehibe ...
"Agenam-panamafisana ny tontolon'ny beton" amin'ny akora fanamafisam-peo
tamin'ny admin tamin'ny 20-09-09
Ny mpandraharaha fanamafisana ny simenitra dia karazana mpandraharaha manamafy ny simika simika misy rano. Manana endrika tsy misy loko sy mangarahara izy io. Misy fitaovana roa singa sy singa tokana ao amin'ny tsena. Ny vokatra manamafy ny fitaovan'ny singa roa dia tsara kokoa ....
"Beton mitambatra maivana" amin'ny akora fananganana vaovao
Ny beton mavesatra maivana (LGC), iray amin'ireo akora fananganana vaovao, dia simenitra maivana vita amin'ny maivana maivana miaraka amin'ny hakitroky tsy mihoatra ny 1900kg / m3, fantatra ihany koa amin'ny beton maivana mifangaro. Miorina maivana maivana dia manana toetra mampiavaka ...
Misokatra ny forum fihaonana an-tampon'ny teknolojia fiarovana ny beton
Tamin'ny taona 2018, nahatratra 2,35 miliara metatra toradroa ny vokatra vita amin'ny beton nasionaly, ary tamin'ny 2019, dia nahatratra 2,4 miliara metatra toradroa, niaraka tamin'ny fiakarana 3,46% teo ho eo isan-taona. Ny fanjifana simenitra ao Shina dia nalahatra teto amin'izao tontolo izao nandritra ny 30 taona mahery. Tamin'ny taona 2019, ny havoanan'i Shina tanteraka ...